तीन दिदीबहिनीको सामूहिक बलात्कार ! • raradiodarpan.com
तीन दिदीबहिनीको सामूहिक बलात्कार !
राति भेट्न बोलाएर ९ जनाको समूहले तीन बालिकामाथि सामूहिक ब’ला’त्का’र गरेको छ । कमलामाई नगरपालिका–५ बोझेका एकै घरका दिदीबहिनी र उनीहरुको आफन्त पर्नेमाथि सामूहिक ब’ला’त्का’र भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय सिन्धुलीले जनाएको छ ।
प्रहरी निरीक्षक रामभक्त भट्टराईका अनुसार घ’ट’ना गत शनिबार रातिको हो । ‘शनिबार राति ९ जना युवाहरुले बालिकालाई बोलाएर घरनजिकै बोझे खोला बगरमा लगी सामूहिक ब’ला’त्का’र गरेको पुष्टि भएको छ,’ उनले भने । ब’ला’त्कृ’त हुने बालिका १५, १६ र १७ वर्षका हुन् ।
प्रहरीका अनुसार बलात्कार गर्ने एक जना र ब’ला’त्कृ’त हुने एक जना बालिकाको पहिलेदेखि नै चिनजान थियो । चिनजानको आधारमा ती युवकले बालिकालाई फोन गरेर भेट्न बोलाएका थिए ।
आफ्नै बहिनी र आफन्त बहिनी लिएर उनी भेट्न खोला बगरमा गइन् । त्यही बेला ९ जनाको समूहले तीनै जना बालिकामाथि सामूहिक ब’ला’त्का’र गरेको प्रहरीको भनाइ छ । प्रहरीले ९ जनामध्ये ३ जनाले प’क्रा’उ गरेको छ भने ६ जना फरार रहेका छन् । आजको अन्नपूर्ण पोष्ट दैनिकमा समाचार छ ।